မြစ်ကြီးဟာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှေးအတီအတေ ကတည်းက သည်လွင်ပြင်ကြီးကို ဖြတ်၍ မြောက် အရပ်မှ တောင်အရပ်သို့ စီးဆင်းလာခဲ့သည်။ သူစတင် စီးဆင်းသည့် နေရာမှစ၍ ပင်လယ်ကြီးထဲ တိုးဝင်ပျောက်ကွယ် သွားသည်အထိ လမ်းတလျောက်က သက်ရှိလူသားများနှင့် သတ္တဝါများကို အကျိုးပြုနေခဲ့သည်။ သည်မြစ်ကြီးကို အမှီပြု၍ စိုက်နိုင်ပျိုးနိုင် ကြသည်။ သည်မြစ်ကြောင်း တလျှောက် ရောင်းဝယ် ဖေါက်ကားကြသည်။ မြစ်ကြောင်းထဲတွင် လိုရာခရီးကို သွားလာကြသည်။
ထို့ကြောင့် သည်မြစ်ကြီးကို အခြေပြု၍ မှီတင်းနေထိုင် သူများက သည်မြစ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ စိမ်းမြသော ငြိမ့် ငြောင်းစွာ စီးဆင်းနေသော မြစ်ကြီးအကြောင်းကို စာတွေဖွဲ့ကြသည်။ ကဗျာတွေဖွဲ့ကြသည်။ တေးသီးချင်းများ ဖန်တီး သီဆို ကြသည်။ သည်မြစ်ကြီးကား ဂုဏ်ကြီးလေစွ။
တစတစနှင့် ကြီးမားလာသော ဂုဏ်ဒြပ်ကြောင့် မြစ်ကြီးမှာ မာန်မာနများ တက်လာခဲ့သည်။ မည်သူမျှ သူ့လောက် အရေး မကြီး အရေးမပါဟု အထင်ရောက်လာသည်။ ဟုတ်သည်ပဲ။ မြစ်ကြီးကို အမှီပြု၍ အကျိုးစီးပွါး ဖြစ်ထွန်းနေသော သူများ၏ ချီးမွမ်း ထောပနာပြုသံများကလည်း စဲသည်ဟူ၍မှ မရှိသည်ကိုး။ မြစ်ကြီး၏ အပြုအမူ အပြောအဆိုများကလည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် မောက်မာလာသည်။ ကျန်သည့်သူများက ဘာဘဲပြောပြော သူ့ကို လေးစားသင့်သည်၊ လေးစားရမည်၊ ဦးထိပ်ပန်ဆင်ရမည်ဟု ပြောလာသည်အထိ တင်တင်စီးစီး ဖြစ်လာတော့သည်။ သူ့လိုရပ်တည်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် အများအကျိုးအတွက် စီးဆင်း ပေးနေသည့် မြစ်ကြီးကို အားလုံးက အလိုက်တသိ မလေးစားထိုက်တော့ ပြီလောဟု ဘေးဝန်းကျင်ကို အမြှင်မပြတ် ပြောနေ သေးသည်။
ထိုအချိန်တွင် မြစ်ကြီးစတင် ဖောက်ဖွားရာ မြောက်ဖက်စွန်း အရပ်မှ မြစ်ငယ်သုံးလေးစင်း ဤသို့ဆိုလာသည်။ သည်မြစ်ကြီး အခုလို ကြီးကြီးမားမား အင်နှင့်အားနှင့် စီးဆင်းနိုင်ဖို့ သူတို့စတင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သူတို့မှ စတင်စီးဆင်း ပေါင်းစည်းပေး လို့သာ ဖြစ်သည်။ သူတိုမရှိခဲ့လျှင် သည်မြစ်ကြီးလည်း မရှိနိုင်၊ ထို့ကြောင့် သူတို့သာ ဤမြစ်ကြီး၏ မူလ ဘူတ ဖန်တီးရှင်များ ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြလာသည်မှာ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ရှိလှ၏။
ထိုသောအခါ၌ မြစ်ကြီး၏ အထက်ပိုင်း ဒေသအတွင်း အရှေ့ဖက်အရပ်မှ မြစ်ကြီးထဲသို့ ပေါင်းစုံစီးဝင်လာသော မြစ်လတ်နှင့် အနောက်ဖက် အရပ်မှ စီးဆင်းလာသော မြစ်လတ်တို့က ဟားတိုက် ရယ်မောကြသည်။ သူတို့ သဘောထား ကြီးကြီးနှင့် ပေါင်းစပ် ပေးကြောင့်သာ မြစ်ကြီးအခုလို ခန့်ငြားကြီးမားလာရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်ငြင်းခုန်ကြသည်။ မြောက်ဖက် အရပ်မှ မြစ်ငယ်သုံးလေးစင်းသည် မြစ်ကြီး၏ မူလအစ ဖြစ်ပင်ဖြစ်သော်လည်း အခုလို သူတို့မြစ်လတ်များက ပေါင်းစည်းမှု မပြုဘဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ထွင်သွားမည် ဆိုပါက သည်မြစ်ကြီး ဘာဖြစ်သွားမည် ထင်သနည်း ဟုလည်း ရန်တွေ့သလို ဆိုလိုက် သေးသည်။ တကယ်တော့ မြစ်ကြီးတစင်း ဖြစ်လာဖို့ သူတို့က မြစ်လက်တက် နေရာများမှ အရေးပါသော တာဝန် ကို ယူပေး နေသူတွေဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြား ပြန်သေးသည်။
ဤသို့မြစ်လတ်များ ရန်တွေ့ငေါက်ငန်း ပြောဆို၍ မဆုံးခင် နေပါဦး နေပါဦး ကျုပ်တို့လည်း ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလို့ ပြောရဦးမယ်ဟု အသံများ ထွက်လာကြသည်။ တခြားသူများ တော့မဟုတ် မြစ်အောက်ပိုင်း ဒေသများမှ မြစ်ကြီးထဲကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် စီးဝင်လာ သည့် အခြားမြစ်လတ်များဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ပေါင်းစီးပေးမှုကိုလည်း မေ့လျှော့အသိအမှတ် မပြုမှာကို စိုးရိမ်သဖြင့် ကြားဖြတ် ၍ အလုအယက် ဝင်ပြောကြခြင်းပင်။ သည်ကြားထဲမှာမှ သူတကာထက် ပို၍ အထွန့်တက်နေသော မြစ်လတ်များလည်း ရှိသေးသည်။ သူတို့ပြောတာကတော့ မြစ်လတ်များ မြစ်ကြီးထဲသို့ ပေါင်းဝင်စီးဆင်းရာတွင် အရှေ့ဖက်ခြမ်းမှ မြစ်လတ်များ သည် အများစုဖြစ်ကြောင်း အနောက်ဖက်ခြမ်းမှ စီးဝင်လာသည့် မြတ်လတ်မှာ နှစ်စင်းသာ ရှိကြောင်း။ ထို့ကြောင့် အရှေ့ဖက် ခြမ်းမှ မြစ်လတ်များ၏ ထည့်ဝင်မှုကို ပို၍အသိအမှတ် ပြုသင့်ကြောင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းနောက် အတော်စောစော ကတည်းက ငြိမ်နေသော ဒေသအသီးသီးမှ မြစ်ငယ်လေးများထံမှ ပူညံပူညံ အသံများ ထွက်လာ သည်။ သည်ကိစ္စသည် မြစ်လတ်များ သက်သက်အတွက် ဂုဏ်ယူရမည်ဆိုလျှင် မတရား။ သူတို့ မြစ်ငယ်ကလေးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အသိအမှတ် မပြုလိုသည့် သဘောထားလောဟု ကျွဲမြီးတိုသည့် လေသံဖြင့် မကျေမနပ် ဆိုလာကြသည်။ သူတို့တင်ပြ လာသည်ကလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ အရှေ့ဖက်ခြမ်းနှင့် အနောက် ဖက်ခြမ်းမှ မြစ်လတ်များ အားလုံး၏ စီးဝင်ပူးပေါင်းမှု အလုံးစုံသည် သူတို့ မြစ်ငယ်ကလေးများ အားလုံး၏ ပူးပေါင်းစီးဝင်မှုနှင့် နှိုင်းစာပါက ရာခိုင်နှုန်းမည်ရွေ့မည်မျှ နည်းပါးနေသေးကြောင်း ထောက်ပြ လေတော့သည်။
သည့်နောက် မထင်မှတ်ဘဲ ခတ်စွာစွာအသံများ နေရာပေါင်း များစွာမှ ထွက်ပေါ် လာပြန်သည်။ တခြားတော့ မဟုတ် ချောင်း ငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ချောင်းငယ်များကလည်း ဤသို့ဆိုလာသည်။ မြစ်လတ်၊ မြစ်ငယ်များ အနေဖြင့် မြစ်ကြီးထဲသို့ ယခုကဲ့သို့ ပေါင်းစုံစီးဝင်နိုင်ခြင်းမှာ မြစ်လတ်၊ မြစ်ငယ်များဆီသို့ ချောင်းလက်တက်များ အနေဖြင့် သူတို့ပေါင်းဝင်ပေးသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် သွားကြေးဆိုပါက သူတို့ချောင်းငယ်လေးများ အနေဖြင့် မြစ်လတ်၊ မြစ်ငယ်များဆီသို့ ပေါင်းဝင် စရာမလို။ ထို့အတွက် မြစ်လတ်နှင့်မြစ်ငယ်များ သူတကာထက် ထူး၍ ဂုဏ်မောက် နေသည်မှာ ရယ်စရာပင် ကောင်းသေး သည်ဟု အကွက်ကျကျ ဝင်ထောက်လိုက်ကြသည်။ သဘောတူဟန် မပြသော်လည်း မြစ်ကြီး အပါအဝင် မြစ်လတ်နှင့် မြစ်ငယ် များကား ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်။
အားလုံး ခေတ္တငြိမ်သက် သွားစဉ် မြောက်များလှစွာသော အသံငယ်ငယ်လေးများ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။ သူတို့ကား တောင် စဉ် တောင်တန်းများဆီမှ ဆင်းသက်လာသော၊ မရေမတွက် နိုင်လောက်အောင် များပြားလှသော ရေဝေကြောများ၏ ရေဆင်းလေးများ ဖြစ်ကြသည်။ ရေဆင်းလေးများက ဤသို့ဆိုသည်။ သူတို့ ရေဆင်းလေးများက မိုးရေကို စတင်ပို့ဆောင် ပေးသော ကြောင့်သာ ချောင်းတို့၊ စမ်းချောင်းတို့ လက်ဦးဆုံး ဖြစ်တည် လာရခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့လို ရေဆင်းလေးများသာ မရှိပါက ချောင်းဆိုသည်မှာလည်း မရှိနိုင်၊ မြစ်ငယ် မြစ်လတ် မြစ်ကြီးဆိုတာလည်း မရှိနိုင်ဟု အချက်ကျကျ ထောက်ပြလေ တော့သည်။ ထိုအချက်ကို တောင်စဉ်တောင်တန်း များကလည်း ထောက်ခံသည်။ တောင်စဉ်တောင်တန်းများနှင့် ရေဆင်း လေးများသည် ဒင်္ဂါးတပြား၏ ခေါင်းနှင့်ပန်းလို အမြဲယှဉ်တွဲ နေကြောင်းလည်း ထပ်မံ ရှင်းလင်းသေးသည်။ ဤတွင် ချောင်း၊ မြစ်ငယ်၊ မြစ်လတ်နှင့် မြစ်ကြီးတို့အားလုံး ပါးစပ် အဟောင်းသားနှင့် ဘာမှခွန်းတုံ့ မပြန်နိုင်။
အငြင်းအခုန်ပွဲကား မပြီးသေး။ သစ်တောက ဝင်လာ၍ သူ၏ကဏ္ဍမှာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးကြောင်း အဆိုတင် သွင်းသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့ သစ်တောများက ရွာကျလာသော မိုးရေကို သွားလိုရာ သွားဟု လက်လွတ်စပယ် လွှတ်မပေးဘဲ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း၍ မြေလွှာများမှတဆင့် ရေဝေကြော ရေဆင်းလေးများကို ဖြတ်ခါ ပို့လွှတ်သော ကြောင့် ဤဖြစ်စဉ်ကြီး တခုလုံး ညီညွတ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့် ရှည်လျှားစွာ ရှင်းပြ လေတော့သည်။ အားလုံးကတော့ သစ်တောကို နောက်မှ ရောက်တဲ့သူက မောင်ဦးလုပ်ခြင်သတဲ့လား ဆိုသော အကြည့်များဖြင့် စိမ်းစိမ်းကြီး စိုက်ကြည့် နေကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဟု မြစ်ကြီးက အားလုံးကိုယ်စား ပြုသည့်နှယ် ဝင်ထောက်လိုက်သည်။ သစ်တောက အရေးကြီးတယ် ဆိုပေမဲ့ သစ်တောကိုယ်တိုင်က မိုးရွာမပေးနိုင်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ခြင်းဖြစ် မိုးရေလာရာ ကောင်းကင်ကြီးသာ မူလအခြေခံ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ခြလိုက်သည်။ သို့သော် အားလုံးက ကိုယ်သာအရေးပါသည်ဟု ခံယူနေသောကြောင့် မြစ်ကြီး စကားကို ထောက်ခံမည့်သူ ပေါ်မလာ။
သူ့အကြောင်းနှင့်သူ ယုတ္တိရှိ သလိုလို ဖြစ်နေသောကြောင့် ငြင်းခုံပွဲကြီးတွင် ဗိုလ်စွဲသူ မရှိဘဲ အီလည်လည် ဖြစ်နေသည်။ ထိုအချိန်၌ မထင်မှတ်သူ တဦး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလာသည်။
ထိုသူကတော့ အဝေးမှ ရောက်လာသော ပင်လယ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကြီးမှ ဤသို့ရှင်းလင်းသည်။ အမှန်တော့ နေမင်းကြီး၏ အပူရှိန်ကြောင့် သူ၏ပယ်လယ်ရေများ အခိုးငွေ့ပြန်ကာ ကောင်းကင်သို့ တက်ကုန်ကြောင်း၊ သူ၏ ကိုယ်ပိုင် ရေများ ဆုံရှုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ သို့သော် ကံကောင်းသည့် တချက်က ထိုရေငွေ့များသည် လေးလံသော တိမ်ဆိုင်များအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားပြီး တောင်စဉ်တောင်တန်း များနှင့်ထိတွေ့ရာမှ ရေအဖြစ် မိုးရွာချလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြ သည်။
သို့သော် သူ့အနေဖြင့် တောင်စဉ်တောင်တန်းများ၊ သစ်တောများ၊ ရေဝေကြောမှ ရေဆင်းများ၊ ကြီးငယ်လတ် မြစ်ချောင်းများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း။ ကျေးဇူးတင်ရသည့် အကြောင်းကတော့ ကျဆင်းလာသည့် မိုးပေါက်များအား ရေအဖြစ် အဆင့်အဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ပေး၍ လမ်းတလျောက် တွင်လည်း သက်ရှိ သတ္တဝါပေါင်းစုံ၏ ကောင်းကျိုး ကို ပြုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်ဟု ရှင်းလင်းပြဆို၏။ ဘာဘဲပြောပြော ပင်လယ်ကြီး အနေဖြင့် သူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် သူ့ရေများ သူ့ဆီကို ပြန်ရောက်လာစေရန် နေရာအသီးသီးတွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သူများ အားလုံးကို အသိအမှတ်ပြု ပါကြောင်း၊ သည်ဖြစ်စဉ်ကြီး အတွက် အားလုံးဟာ မရှိမဖြစ် ရှိနေဖို့လိုကြောင်း၊ ထို့အတွက်လည်း အထူးဂုဏ်ယူပါကြောင်း ပြောကြားရင်း မူလနေရင်းသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွါသွားတော့သည်။
ဤတွင် မြစ်ကြီးတစင်း၏ ဖြစ်တည်မှု အစနှင့်အဆုံးကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရပေတော့သည်။
၂၉ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်
GOOD! please come and haveacheck the pomo-fiction called....NO TITLE#2 by Thu I San at LANOLAY, our worx section! that piece is already 8 yrs old!